Xalinta Khilaafaadka Deegaanka Daraasadaha Kiiska - Ellicott Dredges
Studies Case, Xalinta Deegaanka
Xigasho: Qodista QARANKA ADDUUNKA iyo Dhismaha Harada Kittarnaqundi waa 27-ac. kayd biyood oo ku yaal Columbia, Maryland, oo caan ku ah mid ka mid ah magaalooyinkii ugu horreeyay ee qorshaysan ee Maraykanka. Guga 2010, Ururka Columbia, milkiileyaasha harada, waxay kiraysteen Cashman si ay u nadiifiyaan qashinka iyo haramaha soo ururay tan iyo markii harada la dhisay. Kooxda Cashman waxay joojiyeen mashruuca, waxay cadeeyeen laba caqabadood oo xagga saadka ah, waxayna bilaabeen qorsheyn faahfaahsan oo awood u siineysa inay howsha dhameystiraan. Ugu horreyntii, Kittamaqundi waxaa ku xirmay biyo-macaan (hydrilla vertieillata) - weedka biyaha ku jira ee leh laamo fara badan ayaa si fudud ku gaari kara dhererka 25 ...
Massachusetts waxay bartilmaameedsaneysaa PCB "Hot Spot" oo loogu talagalay Dredging
May 1990 Xigasho: Diiwaanka Wararka Injineerinka Saraakiisha deegaanka Massachusetts waxay ku bixiyeen $ 14 milyan si ay uqariyaan una gubaan “meel kulul” oo ah biphenyl-yada polychlorinated (PCB) ee hoose ee dekedda New Bedford. Nadiifinta ayaa la sifeeyey faaruqin ku taal aag 5-hektar ah oo ku yaal wabiga Acushnet halkaas oo qiyaastii 45% kiimikooyinka dekedda iyo wasakhda birta culus ay ku urursan yihiin. Dekedda 1000-acre waxay leedahay uruurinta ugu sareysa qaranka ee PCB waana mid ka mid ah goobaha ugu xun ee ku jira Liiska Mudnaanta Qaranka ee Superfund. Ku daadinta “barta kulul” waxaa loogu talagalay in lagu xakameeyo u soo guurista wasakhda habsami u socodka dekedda inteeda kale. Nadiifinta ayaa ugu horeysay ...